Isan'andro, eo anivon'ireo karazam-panafody maro be, betsaka kokoa noho ireo vokatra vokarina ao Shina. Anisan'izany ny fanafody fanalana zaza.
Sambany vao nivoaka ny takelaka Sinoa, izay natao hanala zaza, tany amin'ny firenena eoropeanina tamin'ny taona 2005. Nanomboka teo, efa ela no lasa, izay nitombo ny lazan'ny vehivavy bevohoka te-hanala zaza am-bolana. Amin'ny tranga sasany dia tsy mihazakazaka ny vehivavy noho ny fampiharana ireo medikaly ireo ho toy ny " fanalan-jaza amin'ny fampiasana fanafody".
Ny takelaka Shinoa mahazatra indrindra mitondra ny fanalan-jaza dia ny analogs of Mifepristone, izay matetika mifandraika amin'ny zava-mahadomelina hafa, Misoprostol.
Ny mifepristone dia natsangana voalohany tany Frantsa, tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-20. Mandritra ny fotoana maharitra, ampiasaina amin'ny fanalan-jaza ara-pitsaboana na ny famaranana ny fitondrana vohoka tsy niriana noho ny antony ara-tsosialy. Ny vokatra tany am-piandohana, novokarina tao amin'ny Vondrona Eoropeana, dia novolavola tanteraka ny fizotran'ny teknolojia rehetra sy ny fampiasana fitaovana maimaim-poana, izay tsy azo lazaina momba ny analoga avy any Shina.
Oviana ary ahoana no nampiharany?
Ireo takelaka Shinoa ireo dia matetika ampiasain'ireo vehivavy hanapaka ny vohoka tsy nahy - ny fanalan-jaza, na ny olon-tsotra, ny famoahana. Na izany aza dia tsy maintsy tsaroana fa afaka ampiasaina mandritra ny fe-potoana tsy mihoatra ny 50 andro izy ireo.
Ampiharina amin'ny ravin-kibo iray na 3 ora aorian'ny sakafo. Amin'ny 3 andro dia misy vehivavy iray misotro takelaka kely kely, izany hoe 6, ary 4 andro - 3 lehibe amin'ny fotoana iray ihany. Aorian'ny fitsaboana ny zava-mahadomelina dia tsy afaka mihinana ianao ary tsy manao fampiasana ara-batana.
Ny fihenan'ny fitsaboana mahazatra indrindra dia ny fanosehana ny tranon-jaza, izay amin'ny toe-javatra mivaingana (amin'ny tsy fahombiazan'ny fandidiana) dia mety hitondra ny amputation ny tranon-jaza. Ity zava-misy ity dia tsy manaisotra ny mety hisian'ny vohoka amin'ny hoavy.
Tahaka ny fanafody rehetra, io fanafody io dia misy ihany koa ny fanoherana. Anisan'izany ny aretina ao amin'ny fo, ny atiny, ny voa, ny asma. Tsy azo ampiasaina ny zava-mahadomelina rehefa manitatra ny fitondrana vohoka amin'ny vehivavy.
Leukoplakia ny uteri-nify - fitsaboana
Fanarenana taorian'ny fanalan-jaza
Malahelo ilay banga
Afatory rehefa antibiotika
Tablets ho fanamafisana ny Postinor vohoka
Colpitis - soritr'aretina
Duphaston na Utrozhestan - iza no tsara kokoa?
Inona no hosotroina amin'ny cystitis?
Fampiharana 20 Bubnovsky
Tom Cruise nanapaka ny tongony teo amin'ilay sarimihetsika "Mission: Impossible 6"
Maskin'i Batman manokana
Vehivavy tsara tarehy ho an'ny lohataona
Rice pudding - sakafo matsiro matsiro amin'ny sakafo anglisy
Lamba tsara tarehy amin'ny volo midadasika
Kiraro lohataona - modely lamaody ary inona no tokony hataon'izy ireo amin'ity lohataona ity?
Tattoo Olga Buzovoy
Fidio ny fametrahana amin'ny tananao manokana
Asio tetezana eo amin'ny lakozia sy efitra fandraisam-bahiny
Vato fotsy ho an'ny fasa
Mamolavola tavimamy miaraka amin'ny tsofa - hevitra niavaka ho an'ny sakafo isan-karazany
Niditra tao an-trano ireo valala ireo - famantarana